Crypto News 29.10.2018 - Blockchain News
EyeDwarha 29, 2018 admin
zokuqala blockchain zakwaSirayeli ziye kathathu kulo nyaka ukuya 200
Kukho ngoku ngaphezulu kunayo 200 Amashishini blockchain-based kwaSirayeli, ngokutsho kwengxelo Israel Blockchain Association. Lo ngumbutho blockchain ubanga ukuba okungenani 57 zokuqala dlt Israeli usebenzisa blockchain ukuphazamisa iteknoloji mali yesizwe (Fintech) eziphilayo kanti 37 zinkampani swi le neMigaqo / kumacandelo Iziseko ezingundoqo kunye nabanye abaliqela asebenza kwicandelo yokhuseleko kuqoqosho.
Ongumsunguli Partner Israeli Blockchain Association Roman Gold wathi: "Le blockchain ecosystem Israeli ngoku nazo zombini inkxaso kunye inguqu…abadlali ngaphezulu kumaziko baqalisa ukungena kwimarike. Kwimeko, imakethi ndati self-zokuhlanjululwa "
Bitcoin exchange Bitstamp ezifunyenwe yi zokudlala group NXC
Cryptocurrency exchange Bitstamp othe wafunyanwa NXMH, ishishini utyalo-mali esekelwe eBelgium ungowabantu baseMzantsi Korean nabaphathi NXC. Ingabinani wathabatha emhandzini ubunini isininzi ngokusebenzisa deal. Bitstamp CEO Nejc Kodrič baligcine kwisibonda ubunini abambalwa kunye ningaqhubeki nibaleka imisebenzi. inkampani engumzali NXMH kaThixo, NXC, Uphinde exchange cryptocurrency South Korea Korbit, kwaye kakhulu umdlalo developer South Korea kaThixo.
CEO Bitstamps uthe abathengi akayi kubona naluphi na utshintsho ngokukhawuleza iinkonzo & ukuba exchange ine olufanayo ekhoyo zokuphucula, afuna ukuba babambelele ku xesha. Kwingxelo, NXMH umphathi mali Hendrik Ghys uthe “Bitstamp yenye yokutshintshiselana elidala kunawo-ayahlonitshwa cryptocurrency kwaye sibona ukukhula ezincumisayo njengoko kolu shishino iyaqhubeka nokuguquguquka … Siye yafumana Bitstamp kuba sibona njengento qhinga, utyalo-mali lwexesha elide.”
kuthiwa exchange Small Bitcoin Canadian asitsala uphumo umkhonyovu ngemali abasebenzisi
A exchange Bitcoin encinane esekelwe e Alberta, Khanada, uye intanethi. Phambi page lwabo Twitter waya ngaphandle kweintanethi, MapleChange Sibhengeze on Twitter bona “akukho mali esithe xaxe kwii ukuhlawula nabani umva. "Le exchange wathi ukuba" bug "eyamncedayo" abanye abantu "ukurhoxisa yonke imali kwi exchange. Bambi ukhumbule ixesha xa Mt. Gox ibango iingxaki ezifanayo. $6 million kwiingxowa abasebenzisi ezingekhoyo.
akhawunti Twitter exchange omncinane kukaThixo kuphela ~ abalandeli 2,000. Abantu abaninzi abathi i MapleChange "my" has zonke iimpawu i scam yokuphuma. Okokuqala, exchange kubikwa ityala. 2makabuyele, emva lomnqweno yimfumba exchange isusiwe zonke kwimidiya, ngempumelelo zanyamalala ngokupheleleyo. I domain ngokwayo, kubhaliswa GoDaddy ngabanye "Josephus P,"Akukho uthathwa njengokwaziyo “ngendlea igama.” kwakhona, nexesha “kugula” waba ekuseni ngeCawe xa abantu balele.
Ingxelo Daily Market Kraken for 28.10.2018
$40.5M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Indlela Endayeka Phantse 200 Bitcoin ...
Inyanga ukungaphili for Bitcoin (BT...
Lightning Network - The Good a...
We have always been trying to ...
Ethereum Classic (etc): A Brie...
Hey Daily Team Altcoin, How ar...
Post Previous:Crypto News 27.10.2018
Post Next:Crypto News 31.10.2018